Guardiola ayaa sheegay in Aguero uu ku soo bandhigo awoodiisa garoonka haddii uu doonayo… – Hagaag.com
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Sergio Aguero uu wali door muhiim ah ka ciyaari karo kooxda ka dib markii uu ka soo laabtay dhaawac halis ah oo jilibka ahaa, laakiin (weeraryahanka reer Argentina) waa inuu soo bandhigaa awoodiisa garoonka dhexdiisa hadii uu doonayo inuu qandaraas cusub helo.
Aguero, ayaa ku soo biiray City sanadkii 2011, waana gooldhaliyaha taariikhiga ah ee kooxda isagoo leh 254 gool, wuxuu qandaraaskiisa dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan, wuxuuna kala xaajoon karaa mustaqbalkiisa kooxaha ka baxsan dalka laga bilaabo bisha Janaayo.
Aguero, oo 32 jir ah, ayaa dhaawacmay bishii June, waxaana uu soo laabtay intii ay socotay ciyaartii ay City 1-0 kaga badisay Arsenal Sabtidii horyaalka Premier League.
Guardiola ayaa soo laabtay, isaga oo u sheegaya warbaahinta Ingiriiska, “Aguero waa inuu hadda muujiyaa inuu u qalmo inuu halkaan sii joogo, iyo inuu sii wado ciyaar wanaagiisa, isla markaana uu dhaliyo goolal, kuna guuleysta kulamada, ka dibna kooxda ayaa go’aan ka gaari doonta.”
“Hadii uu ku ciyaaro heerkiisa, shaki kuma jiri doono inuu sii wadi doono ilaa iyo inta uu go’aan ka gaarayo, maxaa yeelay waa mid aan caadi aheyn, muhiim ayuu noo yahay, taageerayaashayada iyo qof walba,” ayuu raaciyay.
“Laakiin wuxuu maqnaa 4 bilood waana inuu si joogto ah tababarka u wado oo uu bilaabo goolal dhalinta. Aguero oo garoonka ku jira waanu fiicannahay oo waanu bad qabnaa. Waxaan weynay xirfadiisa waqti muhim ahaa qeybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore.
City, oo ku jirta kaalinta 10aad ee horyaalka iyadoo leh 7 dhibcood 4 kulan oo ay ciyaareen, ayaa bilaabaya ololahooda Champions League Arbacada marka ay wajahayaan kooxda Porto ka hor inta aysan West Ham United kula ciyaarin Horyaalka Ingiriiska horraanta toddobaadka soo socda.